सिंगो आकाशको अर्थ | मेरो खेस्रा whatever i feel
२०६५ फाल्गुण ११ गते नेपाल साप्ताहिकमा मेरो स्तम्भ “बायाँ फन्को” मा प्रकाशित
“मैले सिंगो आकाश कहिल्यै पनि देख्न पाइनँ,” केही दिनअघि गीतकार तथा संगीतकार भीम विरागले कुरैकुरामा भन्नुभएको यो वाक्यले भित्रैसम्म नराम्ररी हल्लाइदियो । कुरा भाग लगाएर बेचेको खसीको मासुबाट सुरु भएको थियो । केही दिनअघि भीम विराग दाइलाई भेट्न गएका बेला निस्केको प्रसंग हो यो । उहाँलाई खसीको मासु मन पर्छ भन्ने थाहा भएकाले कुरैकुरामा मैले आफ्नो घरछेउमा भाग लगाएर बेच्ने खसीको मासुको प्रसंग कोट्याएको थिएँ ।
फूलै फूल मात्र पनि हैन रै’छ जीवन
काँडाबीच फुल्ने फूल रै’छ जीवन ।
यही कुरा सुनाउँदा भावुक हुँदै भन्नुभो, “त्यो अलिअलि सबैथोक भएको मासुलाई जसरी हामी आ-आफ्नो रुचि र स्वाद अनुसार पकाएर खान्छौँ, जीवन पनि त त्यसै गरी बाँच्छौँ नि ! म पनि त्यसरी नै ७४ वर्ष बाँचिसकेछु ।” १४ वर्षको उमेरमा खुट्टा र त्यसका कारण ढाडले दिएको समस्याका कारण कति वर्ष त उहाँले ओच्छ्यानमा मात्र बिताउनुभो । त्यसपछि उपचार भएर उठ्न हिँड्न सक्ने भएपछि पनि कहिले सोझो उभिन सक्नुभएन । उहाँले थप्नुभो, “मैले कहिल्यै पनि सिंगो आकाश देख्न सकिनँ । कहिलेकाहीँ सोच्छु, कसरी यत्रो लामो समय बिताएँ होला ? अनि लाग्छ, गीतसंगीतकै कारण म अहिलेसम्म पनि बाँचेको हुनुपर्छ ।”
« तीन प्रसंग र एक सोच
बादलको आकार »
One thought on “सिंगो आकाशको अर्थ”
“–हाम्रो नियतिमा पनि त प्रेम – घ्रिणा , मिलन – बिछोड , हासो – आशु , उमङ्ग- बेदना , जित – हार , उपलब्धी – असफलअता , अनी उकाली -ओराली सबै थोक को अ लि अ लि भाग हुन्छ — मान्छेले म यो भोग्छु र यो भोग्दिन भन्न् कहाँ पाउछ र ? –”
” बिकल्प को खोज भनेको रहर भन्दा बढी आबश्यक्ताले जन्मने कुरा हो । प्रयोग भनेको असन्तुस्टिको ग र्भ मा हुर्कने भ्रुण हो —”